उडुस, मुसा, झिंगा र माउसुलीबाट छुटकारा पाउने घरेलु उपाय! जानीराखौ काम आउछ … – पुरा पढ्नुहोस्……
उडुस, मुसा, झिंगा र माउसुलीबाट छुटकारा पाउने घरेलु उपाय! जानीराखौ काम आउछ …
घरेलु तरिका अपनाएर भगाउनु होस् आफ्ना वारी परिका यी घातक बस्तुहरु:
मरिच , प्याज र लसुनलाई पिसेर पानीसँग मिसाएर मिश्रण बनाउनुहोस् । यस मिश्रणलाई साङ्ला आउने ठाउँमा छर्किनुहोस् । यसको गन्धलाई सहन नसकि साङ्ला भाग्छ ।
मुसालाई पुदिनाको गन्ध मनपर्दैन । यदि तपाई मुसाले गर्दा दिक्क हुनुभएको छ भने, कपासको सानो टुक्रामा पुदिना हालेर मुसा आउने सम्भावित ठाउँमा राख्नुहोस् । यसको गन्धले मुसालाई श्वास फेर्नमा गाह्रो हुन्छ । जस्ले गर्दा मुसा मर्छ ।
झिंगाबाट छुट्कारा पाउनको लागि घरलाई सफा राख्न जरुरी छ । यसका साथै ढोका सधैं बन्द गनुपर्ने हुन्छ । यसो गर्नाले पनि झिंगा आउने समस्या हुन्छ भने, कपासलाई धेरै गन्ध आउने तेलमा डुबाएर ढोकासँगै राख्नुहोस् । तेलको गन्धले गर्दा झिंगाहरु बाहिर जाने गर्छन् ।
प्याजको रस उडुसलाई मार्नको लागि राम्रो औषधि हो । यसको गन्धले श्वास फेर्नमा उडुसलाई कठिनाई हुन्छ , जस्ले गर्दा उडुस तुरुन्तै मर्छ ।
माउसुलीलाई घरबाट भगाउने यो निकै नै राम्रो तरिका हो । ५–६ मयुरको प्वाँखलाई भित्तामा टाँस्नाले केही दिनमै माउसुली गायब हुन्छ । मयुरले माउसुलीलाई खान्छ । यसै कारणले गर्दा छेपारो मयुरको प्वाँख देख्ने बितिक्कै भाग्ने हुन्छ । यदि मयुरको प्वाँख पाउन सक्नुहन्न भने, अन्य चराको प्वाँखलाई पनि हाल्न सक्नुहुन्छ|
Prevयसकारण बिग्रिन्छन् तपाइको श्रीमतीहरु समयमै सचेत हुनुहोस् ! भिडियो सहित
Nextराजा विरेन्द्र जनप्रिय मात्र होइन् राष्ट्रवादी राजा पनि थिए.. एकपल्ट सबैले हेर्नुहोला .
झण्डै ३ करोडले हेरेको गीत गाएका यी गायक लाई धेरैले चि,न्दैनन् भन्छन् ‘मुटुमा चि’रा पर्या छ’- हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
आफ्नी आमालाई सʼम्झिएर रोʼए रबि लामिछाने ! हेर्नुहोस (भिडियो सहित)
आफ्नी आमालाई टाढैबाट अन्तिम बिदाई ..
गायक दुर्गेश थापाले अशोक दर्जीको घर बनाउन लागी गरे ठुलो सहयोग हेर्नुहोस (भिडियो सहित)